I-Tic Tac Toe 🥇 Dlala kwi-intanethi simahla kwi-emulator
Inyawana ezingutic TAC Ngubani ongazange adlale i-tic-tac-toe? Le yenye yezona zinto zidumileyo nezonwabisayo ekufuneka uzikhumbule. Ngaphandle kokulula nangokukhawuleza, lo mdlalo unceda ekuphuculeni kakhulu amandla akho okuqonda.
I-Tic Tac Toe: indlela yokudlala inyathelo ngenyathelo? 🙂
Ukudlala Blackjack online simahla, nje landela le miyalelo ngamanyathelo ngamanyathelo :
inyathelo 1 . Vula isikhangeli sakho osithandayo kwaye uye kwiwebhusayithi yomdlalo Isiphelo sendlela.
inyathelo 2 . Nje ukuba ungene kwiwebhusayithi, umdlalo sele uza kuboniswa kwiscreen. Kufuneka ucofe nje umdlalo kwaye ungaqala ukudlala, khetha ukudlala ngokuchasene nomatshini okanye dlala nomhlobo. Unokukhetha nenani lezikwere ibhodi ekufuneka ibenalo.
Inyathelo 4. fumana Iithayile zakho ezintathu zilungelelane ngokuthe nkqo, ngokuthe tye, okanye ngokudibeneyo.
Kukho iindawo ezininzi ezenza Inyawana ezingutic TAC ifumaneka simahla. Ungadlala ngerobhothi okanye nomntu. Nokuba uGoogle uyenza ifumaneke. Ngamafutshane, kufuneka ukhangele "i-tic-tac-toe" kwiqonga.
Ngaphezulu kwayo yonke le nto, lo mdlalo ufanelekile nakubani na ukusukela kwiminyaka emihlanu.
Yintoni iTic Tac Toe? 🤓
Inyawana ezingutic TAC ngumdlalo olula kakhulu wemithetho, ongazisi bunzima kubadlali bayo kwaye ufundeka ngokulula. Imvelaphi ayaziwa, kwaye ibonisa ukuba inokuba yaqala kwi-Egypt yamandulo, apho kwafunyanwa khona iitreyi ezakhiwe elityeni, ezazingaphezulu kweminyaka engama-3,500 XNUMX ubudala.
Into yomdlalo kukubeka ii-O okanye ii-X ezintathu kumgca othe ngqo.
Imbali yeTic Tac Toe 😄
Umdlalo uye wathandwa kwi eNgilani kwi I19 yekhulu leminyaka , xa abafazi behlanganisene emva kwemini ukuba bathethe kwaye bahombise. Nangona kunjalo, abantu abadala, ngenxa yokuba bengasenakuyimfakamfeleza ngenxa yamehlo abo abuthathaka, bonwatyiswa ngumdlalo owathi wabizwa elinye igama Amanqatha kunye neminqamlezo .
Kodwa imvelaphi yomdlalo indala kakhulu. Ukumbiwa kwe UKurna tempile eYiputa ifumene izingqinisiso zayo ezisusela kumhla we-14 kwinkulungwane BC . Kodwa ezinye izinto ezifunyaniswe kwizinto zakudala zibonisa ukuba iTic Tac Toe kunye nezinye izinto ezifanayo ziye zaphuhliswa ngokuzimeleyo kwimimandla eyahlukeneyo yomhlaba : Zazidlalwe kwi-China yamandulo, i-pre-Columbian America kunye ne-Roman Empire, phakathi kwezinye.
Kwi-1952, i EDSAC umdlalo wekhompyutha OXO yaphuhliswa, apho umdlali acela umngeni kwikhompyuter kwimidlalo yeTic Tac Toe. Yatsho njalo enye yemidlalo yevidiyo yokuqala apho kukho iindaba.
Imigaqo yeTic Tac Toe 📏
Ibhodi yi imiqolo emithathu ngekholamu ezintathu Matrix .
Abadlali ababini bakhetha inqaku elinye, ngesiqhelo a isangqa (O) kunye nomnqamlezo (X).
Abadlali badlala ngenye indlela, inyathelo elinye ngokujika , kwindawo engenanto ebhodini.
Injongo kuku fumana izangqa ezintathu okanye iminqamlezo emithathu ngokulandelelana , ngokuthe nkqo, ngokuthe nkqo okanye ngokungqameneyo, kwaye ngaxeshanye, nanini na kunokwenzeka, thintela umchasi ekuphumeleleni kwisahlulo esilandelayo.
Xa umdlali efezekisa injongo, zonke iisimboli ezintathu zihlala ziwela.
Ukuba bobabini abadlali bahlala bedlala ngokusemandleni abo, umdlalo uya kuhlala uphela ngokulingana.
Ingqiqo yomdlalo ilula kakhulu, ngenxa yoko akukho nzima ukufumanisa okanye ukukhumbula onke amathuba okuthatha elona nyathelo lilungileyo, nangona inani lilonke lamathuba likhulu kakhulu, uninzi lulinganayo kwaye imigaqo ilula.
Ngesi sizathu, kuyinto eqhelekileyo ukuba umdlalo ube ngumzobo (okanye "ugugile").
winner : Ukuba unamaqhekeza amabini ngokulandelelana, beka eyesithathu.
Vimba : Ukuba umdlali welinye iqela uneziqwengana ezibini zilandelelana, beka eyesithathu ukuze umbambe.
Triangle -Yila ithuba apho ungaphumelela ngeendlela ezimbini.
Vimba unxantathu welinye iqela
Center : Dlala embindini.
Kona engenanto - Dlala kwikona engenanto.
Iingcebiso malunga nendlela yokuphumelela
Ukuze usebenzise ukucinga okunengqiqo, le nto uyithandayo inamaqhinga athile anceda xa ushiya.
1 - Beka olunye lweesimboli kwikona yebhodi
Masithi omnye wabadlali ubeke u-X ekoneni. Esi sicwangciso sinceda ukukhuthaza umdlali welinye iqela ukuba enze impazamo, kuba ukuba ubeka u-O kwindawo embindini okanye kwicala lebhodi, uya kuphulukana.
2 -Bhloka umdlali welinye iqela
Nangona kunjalo, ukuba umdlali welinye iqela ubeka i-O embindini, kuya kufuneka uzame ukubeka i-X kumgca onendawo engenanto phakathi kweesimboli zayo. Ke, uya kuba uvimba umchasi kwaye udale amathuba okuphumelela kwakho.
3- Yandisa amathuba okuphumelela
Ukunyusa amathuba okuphumelela, kuhlala kungumbono olungileyo ukubeka uphawu lwakho kwimigca eyahlukeneyo. Ukuba ubeka ii-Xs zilandelelana, umdlali wakho uya kukuqaphela kwaye akuvimbe. Kodwa ukuba usasaza i-X yakho kweminye imigca, uyawandisa amathuba akho okuphumelela.
Uyenza njani iTic Tac Toe yomntu?
Khetha indawo evulekileyo, ethe tyaba oza kuyidlala. Emva koko, hambisa i-hula hoops kwimigca emithathu kunye nemigca emithathu, njengebhodi lebhola lezemidlalo le-tic-tac-toe. Ungashiyi indawo eninzi phakathi kwe-hula hoops.
Ukuba udlala ngaphakathi kunye nomgangatho onzima, Sebenzisa iteyiphu ukwenza ibhodi . Kwikhonkrithi, unokuzoba imigca ngetshokhwe.
Ukuze kungabikho mntu wenzakalayo ngexesha lomdlalo, jonga umhlaba ngemingxunya, ubutyobo obuyingozi (njengeglasi eyaphukileyo), okanye olunye uhlobo lwengozi, njengengcambu kunye namatye.
Zama ukuseta ngaphezulu kwebhodi enye ukuba unenani elikhulu labadlali. Ngokufanelekileyo, iqela ngalinye kufuneka libe phakathi kwabathathi-nxaxheba abathathu ukuya kwabathathu.
Umdlalo we-tic-tac-toe womntu ungadlalwa ngokwahlukeneyo okanye kumaqela. Kwimeko yesibini, iqela ngalinye kufuneka libe namalungu amathathu ubuninzi. Ibhodi nganye kufuneka ibe namaqela amabini akhuphisanayo, elinye icala ngalinye.
Unokuvumela amaqela anabadlali abangaphezulu kwesithathu, kodwa oku kuya kuwucothisa umdlalo kwaye kungaphela kuyadika abadlali abancinci.
Khetha iqela eliza kuqala
Khetha ukuba ngubani oza kwenza intshukumo yokuqala ngengqekembe okanye ingqekembe. Olunye ukhetho kukucela iqela ngalinye ukuba likhethe inkokeli elizoyithatha, eliya kuqala ngelitye, iphepha kunye nezikere. Iqela lokuqala lokudlala liya kufumana i-X, ngelixa iqela lesibini liza kufumana i-O.
Ukwenza umdlalo uxakeke ngakumbi, cela abadlali ukuba bakhuphisane kuhambo olujikelezayo kwaye bathathe inyathelo lokuqala labaphumeleleyo.
Qhubeka udlale de iqela elinye lizalise izikwere ezintathu ngokulandelelana. Nika iingxowa ezine zelaphu kwiqela ngalinye. Sebenzisa iingxowa ezinemibala eyahlukileyo ukwahlula u-X ku-O. Iqela ngalinye kufuneka libeke ibhegi enye ebhodini ngexesha de enye iphumelele okanye umdlalo utsalile. Ukuba amaqela anamalungu angaphezu kwelinye, cela ilungu elinye leqela ngalinye ukuba lidlale ngexesha elinye.
Susa iibhegi ebhodini ukuqala kwakhona umdlalo. Ukuze abathathi-nxaxheba bangadinwa kukuhlala bedlala kumaqela afanayo, zama ukubatshintshiselana.